Al-Shabaab oo mar kale weeraray Deegaanka Bacaadweyn | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo mar kale weeraray Deegaanka Bacaadweyn
Kooxda Al-Shabaab oo fara ba'an ku haysa deegaanada Galmudug ayaa mar kale waxay weerar kusoo qaadeen deegaanka Bacaadweyn oo ka tirsan gobolka Mudug
BACAADWEYN, Soomaaliya - Kooxda argagaxisada ah ee Al-Shabaab ayaa weerar rogaal celin ah kusoo qaadday deegaan hoos taga Bacaadweyn oo ka tirsan gobolka Mudug.
Horraantii September 2020 waxaa ka dhacay deegaanka Bacaadweyn dagaal faraha looga gubtay, kaasoo dad badani ay ku dhinteen, sidoo kale hub looga qabsaday dadka deegaanka. Xalay, mar kale ayey kooxda oo isa soo abaabushay kusoo qaadeen weerar kale.
Koox dhallinyaro ah oo is abaabushay ayaa billaabay in ay ka hor tagaan kooxda oo doonaysa in ay ka qaadaan lacago baad ah oo ay inta badan ka qaadaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka tiliyaan iyo sidoo kale kuwa ku hoos nool deegaanada ay dowladdu maamusho.
Inta badan iska hor imaadyada nuucan ah ayaa ka dhasha markii ay iska diidaan dadka deegaanka in ay bixiyaan lacagaha sharci darrada ah ee ay kooxdu qaadato, waxaana lagu soo warramayaa in dagaalka hadda dib uga billowday deegaanka Bacaadweyn uu yimid markii ay dadka deegaanku diideen lacagahaas.
Dagaalka oo billowday xalay ayey is fara saareen labada dhinac lamana oga qasaaro ka dhashay ilaa iyo hadda, waxaana Keydmedia Online oo xogta ku saabsan raadinaysa wareysatay dadka deegaanka Bacaadweyne, waxayna noo xaqiijiyeen inuu dagaalkaasi dhacay xalay.
Ma jiro wax qasaare ah oo ka dhashay inta la ogyahay ilaa iyo hadda, maamulka Galmudug weli wax wara kama uusan soo saarin dagaallada kusoo laabtay mar kale deegaanka Bacaadweyne.